नेपालको सगरमाथालाई भारतको दाबी गर्ने सुधिर चौधरीलाई तपाईं के भन्नुहुन्छ ? – AB Sansar
January 14, 2021 Ab-संसारLeaveaComment on नेपालको सगरमाथालाई भारतको दाबी गर्ने सुधिर चौधरीलाई तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
नेपालबारे पटक–पटक भ्रामक सामग्री सम्प्रेषण गरेर विवादित बनेको भारतीय च्यानल जी न्यूजले नेपालमा रहेको विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाबारे भ्रम फैलाउने कोसिस गरेको छ। जी न्यूजले सगरमाथा भारतको पनि भएको दाबी गर्दै विवादास्पद अभियानको घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको अन्तर्वार्ता बजाएको अर्को दिन उक्त च्यानलले सगरमाथामा भारतीयले दावा ठोक्नु पर्ने भन्दै सामग्री प्रसारण गरेको छ। ****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला*****
सङ्खुवासभा ह:त्या प्रकरण : नगद र गरगहना सुरक्षित, ह:त्या रहस्यमय !!
कर्णाली खोज्दै छ भास्कर जस्तै इमान्दार छोरा !!